Imephu Suite iyazama ukujongana nomngeni kwi-Manifold - ii-Geofumadas
Epreli, 2008 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GIS asibonise
Kangangexesha elithile wangena imarike GIS, obuziintlobo ezininzi, ezinye iimbekiselo elungileyo evela kubasebenzisi ukuthembeka enkulu njengoko kunjalo kaYakobi Umrhumo. Kwaye nje iintsuku ezimbalwa yale nkomfa kubasebenzisi ka ngezifo yenziwe, ekubhaleni Google elithi "GIS, obuziintlobo ezininzi" ubonakala isixhobo ukuba thaca njengendlela eyenye, obuziintlobo ezininzi, oku Map Suite.
Ngokukodwa kubonakala kukunye okulungileyo ukuphuhliswa kweelayisenisi zokusabalalisa, kodwa ndinokungabaza kumsebenzi wedeskithophu. Makhe sibone.
1. Ubuncedo-ngaphakathi kweenkonzo (Kuyavunyelwa)
IManifold inendlela engathethekiyo yokuthengisa, kwaye kukuba awukwazi ukukhuphela inguqulelo yolingo yeentsuku ze-30, kodwa kuya kufuneka uyithenge ngesiqinisekiso sokuba kwiintsuku ze-30 awonelisekanga ziya kuyibuyisela imali. Kodwa abantu abaninzi abayithandi le nto, ke iMephu Suite ibonelela ngovavanyo lweentsuku ze-60 ... ayilunganga, ngaphandle kwento yokuba amathokheni enkxaso yeManifold ahlawulwa, i- $ 20 ngombuzo ngamnye ... kwaye ungabuzi kakhulu amaxesha ngamaxesha Bakwimo embi.
2 Umsebenzi (mmm ...)
Ayibonakali kakubi i-Map Suite, enika izixhobo ezahlukeneyo zomsebenzisi kubini kodwa ikakhulu kubathuthukisi. Siyakubona ukuxabiswa James Fee UCh C, kuba uqinisekisile ukuba uyayikhupha loo nto ukuyibonakalisa.
Input inikeza izixhobo kwiPocket PC, idesksi kunye newebhu, ngoko iindawo zokuphuhlisa iinkonzo zewebhu kunye ne-geocoding. Ncokola umzobo kodwa kuya kufuneka sijonge ukunyameka, kuba ke iifayile ze-ESRI zinyanzelisiwe uze ufune ukwenza into ebalulekileyo kwaye ziqala ukuxelela ukuba kufuneka uthenge izongezo ezingaphezulu.
Isakhiwo salo sisekelwe ubuncinci kwizinga le-4 lokusabalalisa kwaye nangona kungelula ukwenza umzekeliso nobume obubuzayo ukusabalala ye-ESRI, asiyibukele kwimeko yokujonga umsebenzisi ofuna imisebenzi ethile:
Yenza umsebenzi we-desktop we-GIS, i-Map Suite Desktop. Ilingqinisiso yeArcView Desktop ye-1,500, okanye into esiyibiza ngokuba yiNkcukacha Yomntu $245 (kungekhona kumandla, kodwa ngombono)
I-Map Suite Desktop ixabisa i-$ 4,995 ... ishilo!
Ukupapashwa kweenkonzo zeemephu, iMaphu ye-Web Suite. Ilingana neArmimS $7,000 o Uluhlu lwezakhono $295
Imephu ye-Web Suite ixabisa i-$ 4,995 ... abanye !!!
Ukuphuhlisa izicelo, i-Map Suite Engine. Inombolo efana ne-ArcGIS Engine okanye iArc Editor $7,000 o Ushishino oluninzi $395 (... akunjalo ngokufanayo nakwizakhono)
I-Map Suite Engine ixabise i-$ 4,995 ... abanye abanye!
Izicelo ze-PDA, i-Map Suite i-Pocket PC, okanye elilinganayo le-ArcPAD, i-Manifold ayinalo elilingana nalokhu, ngokucacileyo.
Imephu yePocket PC Suite ifanele i $ 4,995
Kuyathakazelisa ilayisenisi yokuhambisa, oko kukuthi, ukuba uhlakulela izicelo ngeli qonga akudingeki uhlawule iilayisensi zexesha lokusebenza njengokuba kunjalo kwiManfold ne-ArcGIS, iiplagi zokulawula ukuguqulela kwaye iividiyo Umboniso
Baqinisekisa kwakhona ukuba iinqununu zayo zinikeza i-NET yemvelo.
3 Ixabiso (lahluleka)
GIS asibonise Kunenzuzo yokuba enye yezixhobo zorhwebo zonyango ezinezakhono ezifanelekileyo.
Kodwa ngala maxabiso, i-Map Suite ayiqinisekisi nto,
I-Map Suite Desktop, i-$ 4,995
I-Map Suite Desktop ye-4,995.00
I-Web Suite Suite ye-4,995.00
Imephu Suite Engine $ 4,995.00
Imephu yePocket PC Suite $ 4,995.00
Hambisa i-USA 2.1 $ 2,495.00
I-USA 2006 Data By County $ 495.00
Idatha ye-2006 e-US $ 495.00
Idatha Yehlabathi $ 695.00
I-Map Suite Icon Library ye-295.00
Ewe, le nto ininzi esincinci kunokuba Injini ye-ArcGIS okanye i-ArcGIS Server kodwa ixabiso elibi kakhulu nje ngokuba ne-slogan ethi "Microsoft Gold Certified Partner", xazonke ukuba akukho Microsoft oziqinisekisa ngeWindows Vista.
Naluphi na, ukuba ufuna ukukhuphela iinguqulelo zezilingo kwiintsuku ze-60, zitsho khona.
Hayi!, ndiyibale, inkonzo ibhetele kunokuba i-Manifold, intombazana enhle ihamba, iphikisana nenkxaso embi neyiyo. Ayinayo idola ye-4,995 yeedola, kodwa inhle 🙂
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuthetha ngemifanekiso ye-cartography ... ngaphandle kwamagama amaninzi
Post Next Ndibuyile ukusuka kohamboOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "I-Map Suite iyazama ukujongana nomngeni"
Enkosi Chris, utshintsho lwenziwe. Mhlawumbi ingxabano ngesiqubulo esithi «Free James» nge «James Fee»
Ungakhathazeki, intlanzi yakho yaseBabel ibhetter kune-spanglish my yam
Chris C. uthi:
Andizukuhlonishwa nguJames Fee, mna nguChris C.
Ndiyaxolisa ukuba oko kukubi kweSpeyin, ndasebenzisa iintlanzi zebel 🙂